5 Izikhathi Eziqinisekisiwe Zokuthumela Ama-imeyili Akho Azenzakalelayo Martech Zone
Singabalandeli abakhulu bama-imeyili azenzakalelayo. Izinkampani kaningi azinazo izinsiza zokuthinta ithemba ngalinye noma ikhasimende njalo, ngakho-ke ama-imeyili azenzakalelayo angaba nomthelela omkhulu ngokwazi kwakho ukuxhumana nokunakekela imikhondo yakho namakhasimende akho. U-Emma wenze umsebenzi omuhle ekuhlanganiseni le infographic ephezulu Ama-imeyili angama-5 asebenza kahle kakhulu ongawathumela.
Uma uku umdlalo wokumaketha, usuvele uyazi ukuthi i-automation iyisihluthulelo sokufinyelela izethameli ezifanele ngesikhathi esifanele. Kepha uyazi ukuthi yimaphi ama-imeyili azenzakalelayo azokutholela isibhaxu esikhulu semali yakho yokumaketha?
Uzoyithumela Nini futhi Nini i-imeyili ezenzakalelayo
Yamukela ama-imeyili zingama-86% ezisebenza kangcono kunezincwadi ezijwayelekile ze-imeyili.
Ukukhulisa ama-imeyili khiqiza ukuthenga okungu-47% okukhulu kunemikhombandlela engakhulisiwe.
Ngiyabonga imeyili khiqiza imali ephindwe kayishumi nantathu kunokuthumela ngephromoshini.
Ama-imeyili Okuzalwa phakamisa amazinga okuguqulwa ngama-60% ngaphezu kokunye ukuthunyelwa ngeposi efanayo.
Faka ama-imeyili kabusha shayela ukuzibandakanya okuningi, ama-45% wabamukeli afunde imilayezo elandelayo.
Yize abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukuxhumana nge-imeyili okuningi kakhulu kungaba nomthelela omubi emizamweni yakho yokumaketha, imilayezo ezenzakalelayo efana nalena ayihleliwe ngobuningi. Lokho kunganciphisa amathuba akho okungena ezindabeni zokulethwa. Futhi njengoba zenziwe zaba ngezakho futhi zifike ngesikhathi, zingakhuphula ukuzibandakanya kakhulu. Lokho kusho ukuvula okuningi, amanani wokuchofoza okungcono nokuguqulwa.
Tags: ama-imeyili azenzakalelayoezishintshayoama-imeyili wokuzalwaizinga lokuguqulwai-imeyili ezenzakalelayoisilinganiso sokuguqulwa kwe-imeyiliisilinganiso esivulekile se-imeyilimyemaukukhulisa ama-imeyiliisilinganiso esivulekileamanani avulekilekabusha imeyilingiyabonga ama-imeyiliwamukelekile ama-imeyili
Umbuso Wezokuxhumana Komphakathi Ecommerce
Iwayisa kanjani i-Wallet Yeselula Ukuthengisa KweDrayivu
Nov 26, 2015 ngo-5: 47 AM
Siyabonga ngamathiphu! Ngizokugcina engqondweni ngokuzayo lapho ngisebenzisa i-GetResponse.